Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray AVCHD Videos i
> Resource > Video > Sidee inuu ka soo kabsado Videos tirtiray AVCHD
Kaliya waxaan ka soo saaray camera Sony goolka sawirada aan laakiin halmaamay in aan badbaadiyo videos AVCHD ah. Markaas ayaan formatted kaarka. Anigu ma oga ilaa formatting la dhammeeyey. Waxaan u baahan xal aan dib ugu heli videos AVCHD aan. Midkiinna ma yaqaan sida inuu ka soo kabsado files AVCHD? Anigu ma aan taabtay kaadhka xusuusta tan iyo markaas.
Qaaday fiidiyo AVCHD, AVCHD video leeyahay tayo qeexidda ka badan sida caadiga ah videos. Sida noocyada kale file digital oo dhan, AVCHD video lagu lumin karaa sababtoo ah tirtirka, formatting, howlgal aan habboonayn, nidaamka ama qalad xitaa jeermiska fayraska. Si kastaba ha ahaatee, laga badiyay videos AVCHD la kordhin file ah mts ah / m2ts weli waxay yihiin. Waxa ay la aqoonsaday sida xogta geli ahayn wada baabbi'iyey. Tani waxay ka dhigan tahay u badan tahay inuu ka soo kabsado videos AVCHD haddii ayan qabin overwritten by xog cusub oo ku saabsan kaadhka xusuusta aad.
Sidaas, fadlan joojiya adiga oo isticmaaleya isticmaale fiidiyo AVCHD iyo raadiyo barnaamijka AVCHD awood leh a video kabashada hadda! hab uu, waad joojin kartaa adiga oo isticmaaleya isticmaale muhim SSD M4 oo raadi barnaamijka xog muhim ah M4 si ay kuu caawiyaan. Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa sida codsiga lagu kalsoonaan karo taas oo ka caawisa aad u soo kabsado laga badiyay, tirtiray, formatted iyo kharribeen AVCHD video ka fiidiyo, computer ama qalab kale oo lagu kaydiyo. Ka sokow, waxa kale oo aad soo celin kartaa sawiro lumay, files audio iyo noocyada kale file la qalab aad.
Download version maxkamadda inuu ka soo kabsado videos AVCHD hadda! Labada versions Mac iyo Windows barnaamijka leeyihiin isla hawlgallada.
Tallaabada-to-Step Guide inuu ka soo kabsado tirtiray AVCHD Videos
Fiiro Gaar ah: Waxaa jira halista ah ee videos AVCHD badiyay lagu overwritten by xog cusub oo ku saabsan fiidiyo. Fiican Waad joojin lahaa adiga oo isticmaaleya isticmaale fiidiyo AVCHD tan iyo videos yihiin laga badiyay.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan AVCHD video kabashada
Tani utility kabashada awood badan ku siin doonaa 3 hababka soo kabashada marka aad u abuurtaan on your computer.
Sida aad ka eegi kartaa ka image hoose, aynu dooran "lumay Recovery File" mode inuu ka soo kabsado lumay videos AVCHD.
Tallaabada 2 baarista fiidiyo AVCHD ama kaadhka xusuusta ay u raadiyaan lumay videos
Fadlan dooro drive ee aad fiidiyo AVCHD ama kaadhka xusuusta iyo guji "Start" si ay u bilaabaan iskaanka loogu lumay videos.
Fiiro gaar ah: Waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad fiidiyo AVCHD ama kaadhka xusuusta ay si aad u computer si barnaamijka waxa lagu ogaan karaa.
Tallaabada 3 kabsado tirtiray videos AVCHD
Videos la helay oo la files kale lagu soo bandhigi doonaa furmo suuqa ka dib markii iskaanka. Waxaad ka arki kartaa asalka magacyada video in lagu hubiyo sida badan oo videos AVCHD badiyay lagu soo kabsaday karo.
Markaas oo keliya u baahan tahay in aad calaamadeyso aad videos AVCHD badiyay oo guji "Ladnaansho" si ay u sii si aad u computer.